किन राखिदैछ मन्नतबाट निकालेर आर्यनलाई फार्महाउसमा ? – " कञ्चनजंगा News "
किन राखिदैछ मन्नतबाट निकालेर आर्यनलाई फार्महाउसमा ?
No Comments on किन राखिदैछ मन्नतबाट निकालेर आर्यनलाई फार्महाउसमा ?
मुम्बई(एबीपी लाइभ)– अभिनेता शाहरुख खान र उनकी पत्नी गौरी खानको घर मन्नतमा पुनः एकपटक खुशी फर्किएको छ । उनीहरुका छोरा आर्यन खान केही साताको आर्थर रोड जेलको बसाई पछि घर फर्किएका छन् ।पछिल्लो केही हप्ता शाहरुख र उनको परिवारका लागि तनावपूर्ण समय थियो । उनीहरुले आफ्ना साथीभाईहरुलाई आर्यन खान रिहा नहुञ्जेलसम्म मन्नतमा नआउन आग्रह गरेका थिए । अब भने सबैका लागि मन्नतको ढोका खुला भएको छ ।
शाहरुख र गौरीलाई आर्यनलाई सुरक्षित रुपमा मिडियाबाट टाढा राख्नका लागि सबै कदम उठाएका छन् । आर्यनका लागि बितको २८ दिन निकै कष्टपूर्ण थियो । त्यसकारण उनलाई अब शाहरुख र गौरी केही राहत दिन चाहन्छन् ।
आर्यन जमानतमा रिहा भए पनि उनी अदालतको अनुमति बिना मुम्बईबाट बाहिर जान पाउदैनन् । उनले आफ्नो पासपोर्ट पनि अदातलमा बुझाउनुपर्नेछ ।समाचारअनुसार दिपावलीपछि आर्यन मन्नतबाट टाढिदैछन् । आर्यन आफ्नो अलिबागवाला फार्महाउसमा नै बस्नेछन् । शाहरुखले आर्यनलाई केहीसमय शान्त वातावरणमा राख्नका लागि फार्महाउस रोजेका हुन् ।
← ओलीले ज्ञानेन्द्रलाई भेटेर ‘मौका आए गणतन्त्र उल्ट्याउने हो’ भनेको सुने : प्रचण्ड → सबै सम्पत्ति र घर भा डेर हि डेकी श्रीमतीलाई मिडियाकै अगाडि कु टे श्रीमानले,श्रीमतीले यस्तो ल जमर्दो जवाफ दिइन् (भिडियो हेर्नुस्)